Marketingre ahịa na Ndị Ọrụ Smartwatch: Nnyocha You Kwesịrị Knowmara | Martech Zone
Tupu ị gụọ post a, ị kwesịrị ịma ihe abụọ gbasara m. M hụrụ n'anya ese na m ihe Apple ofufe. O di nwute, uto m na elele adabaghi ​​na nkpado ego na oru nka nke m choro inweta na nkwojiaka m - ya mere Apple Watch bu ihe aghaghi. Echere m na ọ bụghị naanị m na-eche otú ahụ. Dabere na NetBase, ndị Apple Watch kụrụ Rolex na-elekọta mmadụ kwuru.
Enweghị m olileanya dị ukwuu na Apple Watch ga-agbanwe ọrụ m ma ọ bụ ndụ onwe m, mana enwere m mmetụta na mmetụta ọ nwere. Ezie na etinyere ọtụtụ ndị enyi m na ekwentị ha, ana m ahapụ ekwentị m n'akụkụ ma chefuo ya ụbọchị niile. Achọpụtala m naanị ngwa m chọrọ ka a gwa m gbasara elekere ahụ. N'ihi nke a, anaghị m erute ekwentị m ma furu efu na ọkwa nke ngwa ngwa maka elekere na-esote. Naanị nke ahụ emeela ka ọ bụrụ akụ bara uru maka nrụpụta m.
Nnyocha Smartwatch nke Kentico bụ usoro nke iri nke usoro Kentico Digital Experience Research na-aga n'ihu. N'agbanyeghị enweghị ahịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% nke ndị zaghachirinụ ga-achọ imecha nweta smartwatch; na 60% na-ezube ime nke a n'ime afọ na-esote.
Budata Kentico's Smartwatch Research
Smartwatches na-anọchi anya ohere pụrụ iche na ha nwere ike ịme ngwa ndị ọzọ. Ya mere, ka ndị na-arụ ọrụ ngwaọrụ na-agba mbọ iji mepụta okwu dị egwu maka smartwatch, ndị na-ere ahịa na ndị ahịa kwesịrị ilegide anya na obere enyo.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị zaghachirinụ nwere mmasị na echiche nke ị nweta ntụzi aka, ịdebe nri na ahụike, nyocha a na-agbalite olu, na ịdọ aka na ntị oge site na ụgbọ elu, akụ ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta site na smartwatch. The Apple Maps na Watch mwekota bụ n'ezie oké… ebe a na-enwe olileanya na àgwà nke map na-akawanye mma!
Agbakwunyere Smartwatch Ọrụ:
71% nke ndị na-azụ ahịa ga-adị mma na ịhọrọ mgbasa ozi enyere na smartwatch
70% nke ndị na-azụ ahịa kwenyere na ha ga-eji smartwatch maka ojiji nkeonwe
Ọtụtụ n'ime ndị zaghachirinụ kwuru na ha nwere obi anụrị banyere echiche ị nweta ozi-e na ederede na smartwatch ha.
Nke a bụ nnukwu infographic nke na-agbagha ụfọdụ nchọta:
Kentico bụ CMS niile, E-azụmahịa, na usoro ịre ahịa n'ịntanetị nke na-ebute nsonaazụ azụmaahịa maka ụlọ ọrụ nha ma nha ma ọ bụ n'igwe ojii. Ọ na-enye ndị ahịa na ndị mmekọ ike, ngwaọrụ zuru oke na ngwọta ndị ahịa na-eme iji mepụta weebụsaịtị ndị mara mma ma jikwaa ahụmịhe ndị ahịa na-adị mfe na gburugburu azụmaahịa na-agbanwe agbanwe. Kentico Web Content Management Solution bụ nhọrọ bara ụba nke akụkụ ntanetịime igbe, nhazi dị mfe, ma mepee API ngwa ngwa na-enweta weebụsaịtị arụmọrụ. Mgbe ejikọtara ya na usoro niile agwakọtara ọnụ, gụnyere ịre ahịa ọnlaịnụ, azụmahịa E-azụmahịa, obodo ndị dị n'ịntanetị, yana Intranet na Njikọ Aka, Kentico na-enye ahụmịhe ahụmịhe ahịa dijitalụ n'ọtụtụ ụzọ.
Tags: elekere igwekenticoSamsung nchesmartwatchnkuchi smartwatchekiri